အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့ — Steemit
ဒါဟာနိုင်ငံတကာယောဂနေ့ကျင်းပနေ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာသောအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာ Narendra Modi ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းဖြင့်သူသည်မြေတပြင်လုံးကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာနှင့်အိန္ဒိယတွင်ကအစပြုလူနေမှု၏ဤဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုဝေမျှချင်တယ်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ (UNGA) အအဆိုပြုချက်ကိုကြိုက်တယ်နှင့် 21 ဇွန်လနိုင်ငံတကာယောဂနေ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာတစ်နှစ် 2015 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည်။
ယောဂအိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီခေတ်ထဲမှာအမြစ်ကိုရှာဖွေယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာဒီအနုပညာကိုဘွားမြင်လေ၏သူကိုသခင်ဘုရား Shiva ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဒါ့အပြင် Adi Yogi အဖြစ်လူသိများ, Shiva ကမ္ဘာတဝှမ်းအပေါငျးတို့သယောဂဂုရုများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လူသိများသည်။
ပိုများသောလေ့ကအဖြစ်အများအပြား 5000 အဖြစ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဒီတောက်ပအနုပညာအစပျိုးသော Northen အိန္ဒိယအတွက် Indus-Sarasvati ယဉ်ကျေးမှုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤဝေါဟာရကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီဟုလျှောက်သောရေနံတူးစင် Veda ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ယောဂ၏ပထမဆုံးစနစ်တကျတင်ဆက်မှုအတွက်ဂန္ထဝင်ကာလအတွင်း Pantanjali ပြုခံရဖို့ဆိုပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့ 21 ဇွန်ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြီးစီးအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်
ယောဂနေ့ကျင်းပနေ၏စိတ်ကူးအဆိုပြုထားသူကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာ Narendra Modi ကိုလည်းက 21 ဇွန်ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ကိုအားဖြင့်အကြံပြုရုံကျပန်းနေ့စွဲမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီရက်စွဲကိုဤအခါသမယဆင်နွှဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
21 ဇွန်လမြောက်ပိုင်း hemisphere အတွက်ယခုနှစ်အရှည်ဆုံးနေ့နဲ့နွေရာသီယဉ်စွန်းချိန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့်ကိုထောက်ပံ့မယ့်ကာလဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်သော Dakshinaya တစ်ဦးအကူးအပြောင်းခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ ဒါဟာအရှင်ယောဂ၏ဝိညာဉျအနုပညာလေ့ကျင့်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးကာလအတွင်းစဉ်းစားသည်။
အပြင်ဒဏ္ဍာရီကြောင့်သခင်ဘုရား Shiva သူတို့နှင့်အတူယောဂ၏အနုပညာနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာမျှဝေခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာဂုရုအလင်းပေးသောဤအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ရမှတ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ (UNGA) ကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြနှင့် 21 ဇွန်လနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတကာယောဂနေ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမစ္စတာမိုဒီနှင့်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့အဖြစ်အမှတ်အသား 21 ဇွန်လသာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသောအခါဤနေ့ရက်အောင်မြင်မှုစေရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ ပထမဦးဆုံးအယောဂနေ့ကအိန္ဒိယအတွက်အကြီးစားမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအတော်များများကထင်ရှားတဲ့စရိုက်ကပါဝင်ခဲ့။ ထိုအချိန်မှစ. သူကတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တန်းတူဇွဲနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
#good-karma #yoga #international #peace
ယောဂ ကျင့်တာ ကမ္ဘာကျော်နေပြီ